Amaparele Amanzi Amanzi
Amaparele Amanzi Amanzi Amaparele wamanzi ahlanzekile abhekisela kumaparele akhiqizwa emifuleni nasemifuleni. Izindawo ezinkulu zokuzalela amapharele angenasawoti eChina yiZhuji, Changde, Suzhou, Jiangxi, Hubei, ne-Anhui. Njengamanje, amaparele wamanzi angenasawoti ikakhulukazi ...
Umthombo wePearl iChina ungumkhiqizi omkhulu wamapharele wamanzi angenasawoti, futhi umphumela wawo wenza ama-95% omkhiqizo womhlaba. Ukuchuma nokuthuthuka komkhakha wamaparele kunikeza amathuba okuqhubeka kokusebenza kweChine ...
Izakhiwo zomzimba zamapharele
Izakhiwo zomzimba zamaparele Ukukhazimula okuhlukile kwamapharele kubangelwa ukucabanga nokukhanya kokukhanya kulezi zingqimba ezisobala ze-nacreous. Isendlalelo se-nacreous sincane, isicwebezelisi sihle ngokwengeziwe. I-fluorescence ...
Izinyathelo zokuphepha zokugqoka nokugcina ubucwebe bamapharele
Izinyathelo zokuphepha zokugqoka nokonga ubucwebe bamapharele Ngesikhathi Sokugqoka 1. Amaparele akufanele athinte amanzi njalo, futhi kufanele asuswe lapho egeza. Amaparele athinta ubucwebe nge-asidi ne-alkaline detergents njengama-shampoo ...
Ukunakekelwa Kwamagugu Nesexwayiso: Ukungezwani komzimba nobucwebe
Ukunakekelwa Nokuqashwa Kobucwebecwebe: Ukungezwani nobucwebe bezinto zokuhlobisa Beka amagugu akho ekugcineni, uwakhiphe kuqala. Susa njalo ubucwebe bakho lapho uzivocavoca nokubhukuda, futhi wenza ezemidlalo. Hlanza njalo amagugu akho ngendwangu yokuhlanza. Gcina i-j yakho ...
Ukuma kwamapharele wamanzi angenasawoti
Ukuma kwamapharele wamanzi angenasawoti Amaparele wamanzi ahlanzekile eza ngobuningi obungenamkhawulo bobunjwa kusuka nxazonke ezilinganayo kuya kubhasikidi nakho konke okuphakathi. Ngenxa yokutholakala kwabo nezintengo ezingabizi ziphakathi kweziningi ...
Ungahlukanisa kanjani amapharele wamanzi angenasawoti
Ungawahlukanisa kanjani amaparele wamanzi angenasawoti # 1. Ukuqaphela Kuhlukaniswa ngombala, ukuma, usayizi kanye nokukhazimula kweparele. Amaparele wangempela, umbala, ukuma nosayizi akufani ncamashi. Amaparele mbumbulu aphonswa ngomshini womshini ...
Umphumela wokugqoka ubucwebe beparele
Umphumela wokugqoka ubucwebe beparele Abesifazane bathanda ukugqoka ubucwebe beparele ngakolunye uhlangothi ngoba buthambile futhi kufudumele, okungadlala indima enhle kakhulu yokuhlobisa, ngakolunye uhlangothi, ngoba kunenzuzo ethile ...